विदेशमा गएपछि नेपालीहरू चाँडैं लिभिङ टुगेदरमा किन बस्छन ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २ पुष २०७२, बिहीबार ०५:४६ |
-करुणा कुँवर,मनोविद् ।
त्यसका धेरै पक्षहरु छन । लिभिङ टुगेदर वा विदेशमा जाने पुरूषहरूका महिलाहरूले अर्को प्रेमी राख्नु चाहिँ यौन इच्छालाई लिएर मात्रै होइन । मान्छेले जत्ति नै मेहनत गरे पनि, जत्ति नै पैसा कमाएपनि उसले भित्रबाट खोजिरहेको कुरा चाँहि हृयाप्पीनेश हो । खुशीको परिभाषा मान्छेअनुसार फरक हुन्छ । मौखिक रूपमा भनिने हृयाप्पीनेशको एउटा परिभाषा होला । तर, तपाईंको आत्माले खोजिरहेको परिभाषा फरक हुन्छ । दुई जनाको सामिप्यता भयो र मलाई बुझ्ने मान्छे एकजना छ भन्ने हुँदा एउटा सुरक्षाको महसुश हुन्छ । त्यही खुशी होला । त्यो घनिष्ठताले खुशी दिन सक्छ । यसो सुम्सुम्याए माया गरेजस्तो गर्दा पनि उसलाई खुशी महसुस भएको हुन सक्ला । यस्तै कारणले गर्दा ‘एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर’ हुने हो । विदेशका मानिससँग पुरूषको होस वा महिलाको अफेयर हुने हुन्छ ।
अर्को कुरा चाहिँ लिभिङ टुगेदरमा जाने सम्भावना पनि हुन्छ । लिभिङ टुगेदर भनेको त वास्तवमा कस्तो हो भन्दा सुरक्षाका लागि नै उसले बन्दोबस्त गरेको कुराहरू हो । एउटा खुशी पनि हो, एउटा सुरक्षा पनि हो, एउटा माया पनि हो । मनोवैज्ञानिको रुपमा भन्ने हो भने म सेक्सलाई अन्तिममा राख्छु ।
गाउँमा हेर्ने हो भने १४/१५ वर्षमा विहे गर्छन् । एकदमै ढिलो भनेको १८/१९ वर्षमा विहे हुन्छ । यो उमेरमा धेरैको विहे भइसक्छ । विहे गर्ने बित्तिकै विदेश जाने क्रम सुरू हुन्छ । बीचमा स्वदेश आएको बेलामा गर्भवती हुन्छ, एउटा बच्चा पाउने क्रम सुरू हुन्छ । यसरी हेर्दा उनीहरु श्रीमानसँग १० वर्षमा तीन महिना जति सँगै बसेका हुन्छन । यस्तो अवस्थामा श्रीमानको माया के हो ? उसँगको ‘इमोशनल अट्याचमेन्ट’ के हो थाहा हुँदैन । श्रीमान र श्रीमतीबीच इमोशनका जुन कुराहरू हुनुपर्ने हो त्यो भएको हुँदैन । जहिले पनि जिम्मेवारीको मात्रै कुरा हुन्छ । घर बनाउने, पैसा कमाउने, लुगा किन्ने, परिवार चलाउने कुरामात्रै श्रीमान श्रीमतीको बीचमा भइरहेको हुन्छ ।
महिलाहरूमा यौन आवश्यकता चाहीँ भेटिन । मैले आफ्नो भन्दा अर्को पुरूषसँग गएको धेरै महिलाहरू भेटे । श्रीमानकै साथीसँग गएको छ, छिमेकी केटासँग गएको छ । तर, गहिरिएर हेर्ने हो भने उनीहरूमा फिलिङ र इमोशनहरू अट्याचमेण्ट नहुँदाको एकदमै पीडा पाइन्छ । माया गर्ने, सुम्सुम्याउने मान्छे हुँदा मात्र पनि मलाई माया गर्ने मान्छे त छ नि भन्या जस्तो महसुस हुन्छ । त्यस्तो मान्छे नै छैन् भने उसले छिमेकीलाई नै प्रेमी बनाउने भयो । उसले आएर दिनदिनै सुम्सुम्याउँला, माया गरेको देखाउँला, भावना साट्ला । ओहो तिमीलाई कस्तो भएको छ विचरा भन्ला । यति भएपछि त उसका लागि त्यो मान्छे महत्वपूर्ण भयो । जोसँग प्रेमको फिलिङ्स आउँछ, तब सेक्स हुन्छ । सेक्स भनेको लभ त हो नि । वास्तवममा बेश्यावृत्ति हुने सेक्स मात्र फरक हो । पार्टनरसीपमा हुने सेक्स भनेको लभ हो । अंग्रेजीमा त्यही भएर यसलाई ‘लभ मेकिङ’ पनि भनिन्छ ।
माया गर्ने, सुम्सुम्याउने मान्छे हुँदा मात्र पनि मलाई माया गर्ने मान्छे त छ नि भन्या जस्तो महसुस हुन्छ । त्यस्तो मान्छे नै छैन् भने उसले छिमेकीलाई नै प्रेमी बनाउने भयो । उसले आएर दिनदिनै सुम्सुम्याउँला, माया गरेको देखाउँला, भावना साट्ला । ओहो तिमीलाई कस्तो भएको छ विचरा भन्ला । यति भएपछि त उसका लागि त्यो मान्छे महत्वपूर्ण भयो । जोसँग प्रेमको फिलिङ्स आउँछ, तब सेक्स हुन्छ ।
Previousनाकाबन्दीबारे संसदमा बहस हुने
Nextअष्ट्रेलियाका पाँच शहरमा बजाउँछ अष्ट्रेलिया कन्सर्ट हुँदै
१ भाद्र २०७१, आईतवार १५:४४
कविता : मन लाग्यो
१७ भाद्र २०७३, शुक्रबार ०७:५८
११ श्रावण २०७१, आईतवार १६:४७